एक सही विवाह को लागी4कुञ्जी | बेजिया
एक सही विवाह को लागी4कुञ्जीहरु
मारिया vazquez | 08/09/2021 10:00 | बोडस
के एक विवाह को लागी सही हुन को लागी आवश्यक छ? त्यहाँ निर्णय गर्न को लागी धेरै चीजहरु छन्, धेरै मानिसहरु लाई सम्पर्क गर्न को लागी, कि कोहि पनि छक्क पर्न सक्दैन कि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु एक कम्पनी को सेवाहरु भाडामा लिइरहेका छन्। विवाह योजना वा विवाह योजनाकार मा विशेषज्ञ.
एक सही विवाह मनाउन को लागी एक कुञ्जी हो lएक सावधानीपूर्वक संगठन बनाए प्रत्येक तयारी को। किनकि इच्छा र उत्साह को अतिरिक्त, त्यहाँ अन्य गुणहरु छन् कि धैर्य र संगठन को रूप मा अघिल्लो काम को सामना गर्न को लागी आवश्यक छ। त्यहाँ एक सही विवाह को लागी केहि साँचो र एकै समयमा धेरै छन्।
1 एक राम्रो लय
2 सहि ठाउँ
4 विवाह अतिथिहरु
एक राम्रो लय
एक राम्रो संगठन कुञ्जी हो ताकि विवाहको दिन आउँछ सबै कुरा पुरा तरिकाले तेल मेसिनरी जस्तै काम गर्दछ। कि पाहुनाहरु भोज ठाउँ मा दुलही र दुलहा को आगमन को लागी धेरै लामो पर्खनु पर्दैन, कि उनीहरुलाई थाहा छ कि उनीहरु सबै समय कहाँ जानु पर्छ, कि प्लेटहरु को बीच मा धेरै प्रतीक्षा समय छैन वा एक पटक भोज वा उत्सव सबै को घर जति सक्दो चाँडो पाउन सक्नुहुन्छ एक सही विवाह को लागी महत्वपूर्ण छ।
त्यहाँ धेरै चीजहरु लाई ध्यान मा राख्न को लागी छन् र यो मुश्किल छ कि विवाह मा आराम गर्न को लागी र यदि तपाइँ पहिलो व्यक्ति मा ती सबै चीजहरु को बारे मा सचेत हुन को लागी रमाईलो छ। तेसैले, धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु लाई प्रतिनिधि र एक मा शर्त लगाईरहेछन् संगठन मा विशेषज्ञ व्यक्ति यो दिन को रूप मा महत्वपूर्ण को रूप मा तपाइँको पक्ष बाट। यो बुझ्न सजिलो छ, हैन?
विवाह कहाँ हुनेछ? यो हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु मध्ये एक दुलहा र दुलहीको अनुहार। जोडीहरु सामान्यतया के समारोह को प्रकार को बारे मा उनीहरु चाहन्छन्, चाहे एक नागरिक विवाह वा हो एक धार्मिक विवाह, तर यति धेरै छैन जहाँ उनीहरु यो र पछिको भोज मनाउन चाहन्छन्।
केहि बर्ष पहिले सम्म, यो निर्णय सजिलो थियो। समारोहहरु अदालत बाट चर्च सम्म घटाइएको थियो र भोज सामान्यतया ठूला होटल र रेष्टुरेन्टहरुमा आयोजित गरिएको थियो। तर, आज, संभावनाहरु अनन्त छन्: खेतहरु, फार्महाउसहरु, बगैंचाहरु .... सबै विवाह जोडीहरु को लागी उपलब्ध छ।
आदर्श शर्त मा छ एक ठाउँ जहाँ सबैले सहज महसुस गर्न सक्छन्; हामी दुबै प्रेमी र पाहुना। हामी आरामले के बुझ्छौं? ठाउँ बाहिर वा धेरै अभिभूत महसुस नगर्नुहोस्; यो एक ठाउँ हो कि उनीहरुलाई सजीलै तुरुन्तै महसुस गराउँछ।
साथै, यदि एक ठाउँ पर्याप्त पहुँच योग्य छैन, हामी हाम्रा पाहुनाहरु लाई यो बाटो प्राप्त गर्न को लागी प्रदान गर्नु पर्छ। एउटा बस सेवा भाडामा लिनुहोस् जसले पहिले पाहुनाहरुलाई भोजमा लैजान सक्छ र त्यसपछि, भोजको अन्त्यमा, उनीहरुको घरहरुमा।
विवरण धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र एक ठाउँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। फूल र प्रकाश सम्भवतः दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् जब यो विवाह सजावट को लागी आउँछ। उनीहरु दुबैको क्षमता छ एक ठाउँ लाई अधिक स्वागतयोग्य र आकर्षक बनाउनुहोस्।
फूल टेबल मा आवश्यक छ। आदर्श रूप मा, कम र उच्च केन्द्रहरु आन्दोलन प्रदान गर्न को लागी मिश्रण; यो जो यो कला बुझ्छन् द्वारा सिफारिश गरीएको छ। र यदि बजेट तंग छ, तपाइँ सधैं हरियो पातहरु संग फूलहरु लाई बदल्न सक्नुहुन्छ।
प्रकाश कुञ्जी हो, एक ठाउँ लाई अधिक स्वागतयोग्य र आकर्षक बनाउन को लागी, यो दिन को विभिन्न समय मा अनुकूलन को लागी। राम्रो प्रकाश को लागी पनि आवश्यक छ केहि राम्रो चित्रहरु पाउनुहोस्। र यो पनि एक सुरक्षा तत्व हो। यदि भोज राती छ भने, हामी पाहुनाहरु सबै प्रबुद्ध पथ पाउन सुनिश्चित गर्न को लागी हुनेछ।
एक विवाह मा, पाहुना एक प्राथमिकता हो। उनीहरु सबै समय मा सहज महसुस गर्नुपर्छ, जान्छन् कहाँ जाने, कसरी र कहिले त्यहाँ पुग्न। यसबाहेक, हामी, जहाँ सम्म सम्भव छ, यात्रा को लागी शहर को बारे मा जानकारी प्रदान गर्नु पर्छ र, जस्तै कि हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, विवाह गर्न को लागी र यदि यो एक सुलभ ठाउँ छैन।
यदि तपाइँ पनि एक गर्न चाहानुहुन्छ पाहुनाहरु संग विवरण आदर्श केहि व्यावहारिक मा शर्त छ कि उनीहरु विवाह वा घर मा प्रयोग हुनेछन्। हामी espadrilles, प्रशंसक, plaids, स्कार्फ को बारे मा कुरा गरीरहेछन् ... मौसम जसमा तपाइँ बिहे गर्नुहुन्छ, एक वा अन्य धेरै सफल हुनेछ।
हामी पाहुनाहरु को बारे मा सबै समय कुरा गर्छौं र यो हो अतिथिहरु लाई राम्रो संग छनौट गर्नुहोस् र उनीहरुलाई रमाईलो दिनुहोस् यो एक सही विवाह को लागी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुञ्जी मध्ये एक हो। र राम्रो संग छनौट गरेर हाम्रो मतलब उनीहरुलाई आमन्त्रित गर्ने जसको बीचमा हामी सहज महसुस गर्छौं। विवाह एक महत्त्वपूर्ण दिन, सुन्दर तर धेरै नर्भस हुन को लागी जाँदैछ, त्यसैले यो राम्रो संग घेरिएको राम्रो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » बोडस » एक सही विवाह को लागी4कुञ्जीहरु
यो पतन को लागी कपाल रंग मा ठूलो प्रवृत्तिहरु
बानीहरू जो जोडीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ